धार्मिक खबर Archives - Prateek Nepal
January 20, 2021 April 1, 2021 Ramash kunwar
January 15, 2021 April 2, 2021 Ramash kunwar
सर्प र मानवको सम्बन्ध मानव सृष्टिको प्रारम्भिक कालदेखिनै चलिआएको छ। सर्पसंग सम्बन्धित कथाहरु, हिन्दु धर्मशास्त्र तथा पौराणिक कथाहरुमा समावेश भएका छन्। हिन्दु शास्त्र अनुसार सर्पलाई पूजा योग्य जनावर मान्ने गरिन्छ र हरेक वर्ष नागपंचमीमा विशेष पूजा गर्ने गरिन्छ।भगवान शिवले आफ्नो गलामा साँप बेरेको समेत देख्न सकिन्छ ,जुन हेर्दा हामीले साँपको धार्मिक महत्व समेत बुझ्न सक्छौ। […]
७ सय वर्ष पुरानो गणेशको मूर्ति, जसलाई ३ लाखले पूजा गर्छन्
काठमाडौँ / हिन्दूहरुका भगवान गणेशको एक अनौठो मूर्ति इन्डोनेसियाको माउन्ट ब्रोमोमा भेटिएको छ । त्यसो त, इन्डोनेसियामा हिन्दु धर्मको प्रभाव रहँदैआएको छ । तर उक्त गणेशको मूर्ति ७ सय वर्ष पुरानो भएको बताइन्छ । ज्वालामुखी माउन्ट ब्रोमोको मुहानमा स्थापनादेखि नै उस्तै अवस्थामा रहँदैआएको भारतीय मिडिया दैनिक भास्करले उल्लेख गरेको छ । इन्डोनेसियामा १ सय ४१ […]
सात दिनमा सात बार पर्दछन् र हरेक बारकाे कारक ग्रह अलग अलग हुन्छन् । आइतबारको कारक ग्रह सूर्य हो भने सोमबारको चन्द्र, मंगलबारकाे मंगल, बुधबारको बुध, बिहीबारको वृहस्पति, शुक्रबारको शुक्र र शनिबारको कारक ग्रह शनि हो । ज्योतिषी शास्त्रका अनुसार व्यक्तिको जन्म जुन बार हुन्छ, त्यस बारको कारक ग्रहको प्र भाव सम्बन्धित व्यक्तिको स्वभाव र […]
ब्रह्मा र विष्णुले झ’गडा गर्दा जन्मिए भगवान शिव !
January 13, 2021 April 2, 2021 Ramash kunwar
हिन्दूहरुको महान पर्व शिवरात्रि नजिकिदैँ छ । यस वर्षको शिवरात्रि फागुन २० गते परेको छ । नेपाल, भारत लगायत हिन्दू धर्मावलम्बि रहेका विश्वका धेरै देशमा शिवरात्रि पर्व मनाइने गरिएको छ । हिन्दूधर्मका एक महत्वपूर्ण देशता भगवान शिवको विशेष पूजा अर्चना र आराधना गरि यो पर्व मनाइने गरिएको छ । भगवान शिवको उत्पति भगवान शिव जन्मिएका […]
आज मंगलबार । हिन्दु धर्म अनुसार हरेक साताको हरेक एकदिन कुनै भगवानको नाममा ब्रत बस्ने गरिन्छ । त्यसैगरी आज मंगलबार पनि धेरैजना गणेश भगवानको प्रार्थना गरि ब्रत बस्ने दिन । सबै किसिमका सुख प्राप्त गर्न, रक्तविकार शमन गर्न, शत्रुदमनका निम्ति, स्वास्थ्य रक्षार्थ तथा पुत्र प्राप्तिका लागि मङ्गलबारको ब्रत एकदमै उत्तम मानिन्छ । यो ब्रत शुक्ल […]
ॐ लेखेर पूरा हेर्नुहोस !ॐॐॐ आज तपाईको भाग्य कस्तो छ ?
काठमाडौँ । यो वर्षको माघे संक्रान्ति निकै फलदायी रहेको छ। यस दिन मकर राशिमा पाँच ग्रह एकै साथ रहेने भएका कारण निकै फलदायी मानिने ज्योतिषशास्त्रीले बताएका छन्। साथै यो दिन दानको पनि विशेष महत्व हुने गर्छ। पण्डित मशेष तिवारीका अनुसार मकर सक्रान्तिमा देवताको दिनको उदय हुने र पर्वको रात मानिने गरिन्छ। सर्य मकर राशिमा प्रवेश […]
कालिन्चोक भगवती मन्दिरमा दर्शन गर्न जाँदा एक महिलाको मृ’त्यु, मृ’त्यु हुनुको कारण यस्तो
काठमाडौ । दोलखाको कालिञ्चोक भगवती मन्दिरमा दर्शनका लागि गएकी एक महिलाको मृत्यु भएको छ । दोलखाको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल कालिञ्चोकमा दर्शन गर्न गएकी मकवानपुर जिल्ला फापरबारीकी सम्झना रोका मगरको आज मृ’त्यु भएको हो । ३३ वर्षीया सम्झनाको मृ’त्यु भएको खबर जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले जनाएको छ । दर्शन गर्न कालिञ्चोकको कुरीबजार पुगेको र सामान्य बिरामी भई […]